Wixii enthusiast computer kasta oo aad waa in ay soo gaarto ciyaaryahanka warbaahinta waxaa la odhan VideoLan Client soo gaabiyo (VLC). Software Tani waa ciyaaryahan xor ah warbaahinta in ku dhawaad ​​ciyaara dhammaan faylasha. Tani waxay sabab u ah xirmo codecs oggolaanaysa in meel walba ciyaaro video iyo maqal ah qaab ku qalab aad. Waxaa kale oo u ciyaara warbaahinta indhaha ka sokow awoodda ay leedahay in aynu aad qulquli ee internetka. Tani waa warbaahinta kaamil ah ciyaaryahan aad raadinayso laakiin sida nabdoon yahay? Ma VLC ciyaaryahan warbaahinta si wanaagsan loo ilaaliyo?
Marka laga reebo qaababka ay quruxsan oo warbaahinta VLC waa boqolkiiba boqol per ammaan ah si aad u soo dejisan. Waxaa lagu talinayaa in la soo bixi media player ka goobta la ansixiyey. Tani waxay kugu dhawri doonaa si xor ah uga foomka dhammaan fayrusyada. Ciyaaryahanka Tan waxaa kaliya oo aan ka dhawray loogu tala galay magdhow laakiin sidoo kale spyware iyo nooc kasta oo kale oo mischievousness. Sidaa darteed, warbaahinta VLC waa aamin oo kaliya si aad u computer marka aad si guul leh u soo dejisan waxaa goobta Aamin ah. Dhinaca kale waxaa uu ahaa mid ku liito xusay on media player VLC ma aha in ammaan ah. Hoos waxaa ku qoran falanqaynta ah oo saddex news websites.
Si aad u bilaabaan oo leh waa wararka ku saabsan this site http://news.softpedia.com/news/VLC-Player-Not-Safe-81298.shtml . Waxaa si fiican u tilmaamay internetka in nooca ugu dambeeya ee warbaahinta VLC Player 0.8.6d uu leeyahay iin lahayn qaar ka mid ah. Tani waa arrin loo dhan yahay dhammaan dadka isticmaala computer isticmaalaya nooc kasta oo ah habka hawlgalka hadda jira. Tani waxay dhacdaa marka aad kaydiyo faylasha la subtitles in ciyaaryahanka warbaahinta. Sida aad ku shuban faylasha aad jirto oo buux xasuusta sida caadiga ah ku meel gaar ah iyo in uu yahay markii dadka xaasidnimo ah ee CHIP laga yaabaa oo faraha kula files aad. Iyada oo horumar deg deg farsamada waa in aan la filayaa at nooca ugu dambeeya ee ciyaaryahankaan.
On this website http://www.theregister.co.uk/2015/01/20/vlc_code_exec_flaws/ jiraan ayna duleella u warbaahinta VLC ciyaaryahankii in la ogaaday. A xirfad barnaamijyada Turkish buuxa ayaa ogaaday in qofka xaasidnimo laga yaabaa kombiyuutarada musuqmaasuq xusuustaada iyo saaro codes cayimin marka la isticmaalayo files M2V ama FLV file. Waxaad la kulmi doontaa marka la isticmaalayo abuuray qaabab M2V iyo FLV. Gaf waxaa lagu xusay ee ku saabsan versions of media player 2.2.0 iyo 2.1.5 Qaybaha.
Ugu dambeyntii internetka news http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=99464 VLC waa ammaan ahayn ka cayayaanka. In la barbardhigo website ciyaaryahan kale oo warbaahinta VLC waxaana looga faa'iideeysan karaa qof Malaakii loogu tala galay si ay u fuliyaan codes random. Casharka A ka bartay website-kan waa in aad u baahan tahay in laga taxadaraa files ASF kuwa la 2.0.5 VLC version. Tani waa dol weyn oo talooyin ah oo xusuusta aan hadda jira iyo shil habka xasuus VLC. Waxaa si weyn lagu talinayaa in ay ka fogaadaan files furitaanka qof ka dahsoon. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad waa in aan booqato website-fog in ay ammaan.
Gebogebadii ciyaaryahanka warbaahinta VLC waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee warbaahinta, laakiin waxa ay leedahay daciifnimo. Sidaa darteed, in ay ka taxadaraan ka qofkan xaasidnimo. Iska ilaali gujinaya files in aadan aqoon ama tag wax websites fog.
> Resource > VLC > Ma VLC Safe?